Fiara mitondra fiara sy kojakoja fiara, CV & Universal Joint, Hub bearing - Speedway
Mpanondrana kojakoja fiara izahay ary efa 13 taona mahery no tao amin'ity indostria ity. Manana fifandraisana tsara amin'ny mpanamboatra rehetra ao an-tanàna izahay.
Hangzhou Speedway Import&Export Co., Ltd. hita ao amin'ny xiaoshan hangzhou, dia orinasa varotra iraisam-pirenena sy masoivoho fanondranana.
Mifantoka hatrany amin'ny orinasa Drive lines izahay manafatra sy manondrana orinasa ary fampiasam-bola amin'ny tsipika kojakoja Auto mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahan'ny mpanjifa tsy tapaka. Amin'izao fotoana izao, nanangana fiaraha-miasa maharitra sy akaiky amin'ny firenena sasany any Eoropa (Italia, Alemana, Frantsa, Ukraine, sns.), Amerika (Etazonia, Meksika, Brezila, Chile, sns.), Rosia, Azia Atsimo Atsinanana. (Thailand, Malezia, Indonezia, sns.), Oseania (Nouvelle-Zélande, Aostralia, sns.)
Efa 15 taona mahery izahay no niasa tao amin'ny indostrian'ny fiara. Ny fifantohana amin'ny asa: Fividianana ampahany & Marketing / masoivoho fanondranana sy fanafarana manokana amin'ny kojakoja fiara / Fanaraha-maso ny orinasa / fanaraha-maso sy fanaraha-maso ny kalitao / fandefasana & lozika / trano fanatobiana entana / fampiasam-bola mifantoka amin'ny orinasan'ny kojakoja fiara.
Marika vaovao Industrial Drive Shafts Flange Yoke f...
Custom CNC machining driveshaft flange zioga 102 ...
Fiara Japoney Universal Joint
Fitondrana kodiarana ho an'ny TOYOTA VKBA7554
tsara kalitao Industrial Drive Shafts
Ny mety amin'ny famokarana dia lehibe: ...
Avy amin'ny indostrian'ny indostria mahantra ka hatramin'ny rafitra maoderina feno, manomboka amin'ny famokarana afokasoka sy savony fotsiny ka hatramin'ny fiara handeha any ivelany, manomboka amin'ny teknolojia manaraka ny fanavaozana mitovitovy amin'ny teknolojia ...
Inona avy ireo raharaha tokony hojerena amin’ny...
Ny mpamboly vary dia milina fambolen-kazo mamindra ny zana-bary eny amin’ny tanimbary. Ny asany dia ny manatsara ny fahaiza-miasa sy ny kalitaon'ny famafazana zana-bary, mahatsapa ny antony...
Amin'ny taona 2050, ny fiara elektrika dia hanjaka amin'ny fiara ...
Araka ny filazan'i Wood Mackenzie, ho 875 tapitrisa ny fiara mandeha amin'ny herinaratra, 70 tapitrisa ny fiara ara-barotra elektrika ary 5 tapitrisa ny fiara mitondra solika eny an-dalana amin'ny 2050. Amin'ny antenatenan'ny...
HANGZHOU SPEEDWAY IMPORT & EXPORT dia...
Inona no atao hoe shaft drive? Drive shaft no singa fototra amin'ny fifindran'ny hery amin'ny fitaovana fifindran'ny rehetra. Ny fifindrana dia matetika mifandray amin'ny axle fiara, na amin'ny axle familiana ...
Fikambanan'izao rehetra izao tsy misy elasticité miharihary amin'ny lalan'ny torsion. Izy io dia azo zaraina amin'ny fiaraha-miombon'antoka iraisam-pirenena tsy mitovy, fiaraha-miombon'antoka iraisam-pirenena quasi-constant ary iombonana iraisana tsy tapaka.  ① Tsy misy...
Izay fanontaniana na fangatahana anananao dia mifandraisa aminay malalaka. Handamina ny olana rehetra aminareo izahay ao anatin'ny 24 ora.